सुदूरपश्चिमको आर्थिक समुन्नतिको मोेडेल : विकास र वातावरणलाई सँगै लैजाने बाटोमा सुप प्रदेशले काम गर्न सक्ला ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सुदूरपश्चिमको आर्थिक समुन्नतिको मोेडेल : विकास र वातावरणलाई सँगै लैजाने बाटोमा सुप प्रदेशले काम गर्न सक्ला ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ दशमलव २७ प्रतिशत अंश ओगट्छ भने जनसंख्याको हिसाबले ९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमको अंश नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल आउने पर्यटकमा सुदूरपश्चिमको अंश शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी तथ्यांकले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई प्रस्तुत गर्छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि औद्योगिकीकरणको आप्mनै विशिष्ट ढाँचाहरू आवश्यक रहेको तथ्यलाई उजागर गर्छन् ।
(क) परम्परागत कृषि, पशुपालन, वन संरक्षण : बाइसौं शताब्दीको सबैभन्दा अमूल्य चीज बीउ हो । बाइसौं शताब्दीमा जसको बीउमाथि आधिपत्य हुन्छ विश्वमा प्रभुत्व पनि उसैको स्थापित हुने हो । रैथाने जातका पशु जो सँग हुन्छन्, बाइसौं शताब्दीको पाशुपतास्त्र पनि उसैसँग हुने निश्चित छ । मिश्रित रूख बिरुवायुक्त विविधताले सम्पन्न वनजंगल जहाँ हुन्छ बाइसांै शताब्दीको वनजंगलको मान्यता त्यही क्षेत्रले मात्र पाउने निश्चत छ । मोनोकल्चर वनलाई वनजंगलको परिभाषाभित्र नै नराख्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मोनोकल्चर फरेस्टका रूपमा परिणत गर्दा वनको व्यवसायीकरणको हलाहाल विषरूपी प्रभावबाट सुदूरपश्चिम अहिलेसम्म पनि अतिकम प्रभावित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि र पशुपालनमा आधुनिकताको नाममा भित्रिएको प्रलयकारी विनाशलीलाबाट कम प्रभावित छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रैथाने जातका बीउ र नश्लमा आधारित पशुपालन र कृषिप्रणालीको अग्रसर प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसलाई मल्टीकल्चरल फरेस्टको संरक्षकका रूपमा चिनाउन जरुरी छ । यसो गर्दा कृषि, पशुपालन र काष्ठजन्य क्षेत्रमा यो प्रदेशले बजार खोज्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन ।
(ख) वातावरणमैत्री औद्योगिकीकरण : सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरण गर्दा दुईओटा पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो यो प्रदेशको सुन्दरता, विशिष्टता र मौलिकतालाई दृष्टिगत गर्दै यो प्रदेशको प्रकृतिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी उद्योगहरूको विकास गरिनु आवश्यक छ । खानी सञ्चालनका नाममा पहाड नै ध्वस्त गर्ने, सडक पहुँचका नाममा पहाडलाई पानीका मूलविहीन र पहिरोको टाइमबम माथि राख्ने कार्य गर्नु हुँदैन । त्यसैले भारी उद्योगको साटो हल्का उद्योग तथा वातावरणमा कम प्रभाव पार्ने उद्योगको विकास गर्ने रणनीति बन्न आवश्यक देखिन्छ । चामल, तोरी, मैदा र दाल मिल तथा चिनी, मिठाई, चकलेट, बिस्कुट, केक, पाउरोटीजस्ता खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मदिरा, स्पिरिट उत्पादन, पशु आहार, सुर्ती, चुरोट, तम्बाखुु, बिँडी, रेशम, ऊन, स्वीटर, जूट, कपास, मानवनिर्र्र्मित धागोहरू, अल्लो, भाँग्रो, भिमल, केरा आदिका वस्त्र तथा सामान तयार पार्ने उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ । जुत्ताचप्पल, छाता र लट्ठी, माटाका भाँडाकुडा, बेसिन, कमोड, प्यान, सेरामिकका भाडाकुँडा, कप प्लेट, टीका, चुरा, पोते, फलाम, तामा र आलुमिनियमका भाँडाकुँडा, साना कृषि औजारहरूका उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै बाँस र काठका फर्निचरका सामान, गुन्द्री चटाई जस्ता उद्योग यस प्रदेशमा स्थापना गरिनुपर्छ । यी वस्तु उत्पादन गर्दा अन्य उत्पादनको तुलनामा वातावरणमा प्रभाव अति न्यून हुने गर्छ । छाला प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीय वनस्पतिको रसमा आधारित प्रशोधन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हलुका खालका म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । मानिसहरू नै बस्न नसक्ने, सासै फेर्न नमिल्ने, माटोलाई विनाश गर्ने, पर्यावरण ध्वस्त गर्ने र भूमि, जल, वायु, प्रकाश र आकाशलाई प्रदूषित गर्ने खालको औद्योगिकीकरणको पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश जानु हुँदैन । वातावरणमैत्री औद्योगिकीकरणले एकातिर पञ्चमहाभूतको पवित्रतालाई अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर मन, बुद्धि र अहंकारलाई सम्यक् बनाउँदै सिंगो प्रदेशलाई रम्य, सौम्य, आकर्षक र मनोहर बनाउन मद्दत गर्छ । समृद्धि पनि आउने प्रकृतिको पनि संरक्षण हुने यो मोडेल सुदूरपश्चिम प्रदेशले अंगीकार गर्नुपर्छ र नेपालकै नमूना प्रदेशका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।
(ग) संस्कृतिमैत्री पर्यटन : साध्य सही भएर मात्र पुग्दैन साधन पनि सही हुुनुपर्छ । पर्यटक आकर्षित गर्ने नाममा थाइल्यान्डको रात्रिकालीन मनोरञ्जनको मोडलमा जानु अति नै अनुचित हुन्छ । सन् ६० को दशकको झैं गँजडी पर्यटनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने आत्मघाती नीति पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अंगीकार गर्नु हुँदैन । सुदूरपश्चिमको स्थानीय धर्म, संस्कृति र परम्परा तथा वातावरणमा न्यून प्रभाव पर्ने गरी पर्यटन आकर्षण गर्ने नीति लिइनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि भुटानले अंगीकार गरेको नीति अनुकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अपि र सयपाल हिमालमा आरोहणको अनुमति दिएर हिमाल अपवित्र गर्ने मूर्खता गर्नुको साटो ती हिमाल परिक्रमा गर्ने धार्मिक ढाँचाको विकास गरिनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलापले हिमाल आरोहणबाट उठ्ने शुल्कभन्दा धेरै बढी आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा आउने निश्चित छ । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै शीतलताको खोजीमा रहेका मैदानी भागका भारतीय पर्यटक केन्द्रित हिलस्टेशनमुखी पर्यटन, खेलकुद केन्द्रित मनोरञ्जनात्मक पर्यटन र भावनात्मक पर्यटनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनको मूलप्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि देवीथान वृत्त मस्टोबण्डाली वृत्त, कुलदेवता वृत्त, थरगोत्र वृत्त, दरबार, किल्ला, कोटगढी वृत्त, धारा, देवल, नाउ, मुग्रा, विहार वृत्त, शिलालेख, पाटापत्र, ताम्रपत्र वृत्त, जात्रा वृत्तको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
(घ) जलविद्युत्मा आधारित यातायात, तापीय, पाक र यन्त्र प्रणाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवेश गर्दा साथ मानिसहरू आफू बैग्लै ग्रहमा पुगेको अनुभव हुने खालको वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । यसको पहिलो सिँढी भनेको यातायातको विशिष्ट ढाँचालाई अंगीकार गर्नु हो । यो ढाँचा भनेको ट्रली बसमा आधारित मैदानको सार्वजनिक यातायात र केबलकारमा आधारित पहाड र हिमालको सार्वजनिक यातायात हो । यो सञ्जालको विकासले सुदूरपश्चिमलाई एशियाकै विशिष्ट आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विश्वभर चिनाउने निश्चित छ । प्रकृतिका आठैओटाको अंगहरूको पवित्रतालाई कायम गर्न मद्दत गर्ने यातायातको यो ढाँचाले सुदूरपश्चिम प्रदेश विश्वकै आकर्षक पर्यटन गन्तव्यमा रूपमा विकासित हुने पनि निश्चित छ । यसै गरी तापीय प्रणाली, भान्सा र यन्त्र सञ्चालनमा पनि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोगको नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । सुदूरपश्चिममा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने नभई सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्यावरणमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउन उपयोग गरिनुपर्छ । हरित ऊर्जा निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्र्र्न आत्मघाती नीतिबाट लिनु हुँदैन ।
(ङ) करमुक्त प्रदेश : प्रगतिशील कर प्रणालीको मान्यता हुनेले तिर्ने र नहुनेलाई भरणपोषण गर्ने नै हो । नेपालको कर्णाली प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेशभन्दा पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्रतर औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने लगानीका लागि यो प्रदेशलाई करमुक्त प्रदेश घोषणा गर्नु जरुरी छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र कुनै पनि तहले यस प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारको कर, शुल्क, राजस्व नलिने छूटहरू दिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा यो प्रदेशका स्वदेशीमात्रै नभई विदेशी लगानी पनि प्रशस्त भित्रिने देखिन्छ । तीव्रतर औद्योगिक विकासले सृजना हुने रोजगारका अवसरहरूले सिंगो प्रदेशमा शान्ति, समृद्धि र वैभव निम्त्याउने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्च र सहयोग एवम् विकास निर्माणमा लागि चाहिने साधनस्रोतको व्यवस्थाका अनेक वैकल्पिक उपाय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपलब्ध छन् ।
(च) आदर्शयुक्त उद्यमशीलता : उपर्युक्त चारओटा ढाँचाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुआयामिक अभ्युत्थानका लागि सुदूरपश्चिमको सिँगो समाज धैर्यशाली, संस्कारित, महत्त्वाकांक्षी हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजनीतिक दल, अभिभावक र गुरुको त्रिकोणले सिंगो सुदूरपश्चिमको समाजमा आदर्शवादी उद्यमशीलताको विकास गरिनु जरुरी छ । टपरटुइँया उद्यमशीलतातर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो दुश्चक्रलाई तोडी आदर्शयुक्त उद्यमशीलतालाई अंगीकार गर्न सक्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालकै अर्थतन्त्रको मियो बन्ने निश्चित छ ।
बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिको उपाय : लोकप्रियताका लागि नागरिक सहभागितालाई लत्याउने परिपाटी बढ्दै